अब भिडियो कन्फरेन्सबाटै कोरोना महामारीको निगरानी « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
अब भिडियो कन्फरेन्सबाटै कोरोना महामारीको निगरानी
प्रकाशित मिति : २०७६, १७ चैत्र सोमबार १०:३५
काठमाडौं । कोरोनाको सम्भावित महामारीमाथि निगरानी गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘नेपाल कोभिड १९ निगरानी प्रणाली’ सार्वजनिक गरेको छ । महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले प्रणाली विकासकर्ताहरुलाई आफ्ना—आफ्नै ठाउँबाट भिडियो कन्फरेन्समा जोडेर सभा—गृहबाट प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
यसका लागि सूचना प्रविधि महाशाखाले समन्वय गरेको थियो । सफ्टवेयर विकासकर्ता सूचना प्रविधि विशेषज्ञले प्रणाली विकास गरेका हुन् । प्रणालीमा प्राप्त सूचनालाई रोगसँग सम्बन्धित बिशेषज्ञ डाक्टर, तथ्याङ्क विशेषज्ञ, भौगोलिक सूचना–प्रविधि विषेषज्ञले तथ्य बिश्लेषण गरेर त्यसका आधारमा जिज्ञासु प्रयोगकर्ता र महानगरलाई अवस्थाका बारेमा प्रणालीले सूचना दिन्छ । तथ्य बिश्लेषणपछि — बिरामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने नपर्ने, घरमै सुरक्षित बसे हुन्छ कि स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ ? बिशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्छ कि? जस्ता बिरामीका अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ।
यस प्रणालीबाट — संक्रमणको आशंका भएका व्यक्तिहरु अस्पताल गएर भीड हुने अवस्थामा कमी ल्याउँछ । महानगरले तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण पाउँछ र व्यक्तिले घरबाटै सेवा पाउने अवसर पाउँछन् । प्रणाली शुभारम्भ गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख शाक्यले भने, ‘पछिल्लो संवेदनशील परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यो प्रणाली बिकास गरिएको हो । कतिपय बेलामा व्यक्तिको सावधानीले मात्र पनि सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँछ । सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा उपचार नगरी नहुने बिरामी मात्र भए भने सेवाप्रवाहमा अनावश्यक प्रक्रिया, झन्झट र खर्च गर्नु पर्दैन । हामी हाम्रा सेवालाई चुस्त र व्यबस्थित बनाउँदै लाँदैछौं ।’
यसलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्दा हामी महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालन भएको नेपाल एम्बुलेन्स सेवा (१०२) लाई परिचालन गरेर सेवा छिटो र उपचारलाई गुणस्तरीय बनाउने उनले बताए ।
यो प्रणाली अहिलेका लागि कोभिड नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको हो । तर, महामारी नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि यसलाई महानगरले यसलाई नियमित प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । प्रणालीका विकासकर्ता एवं सुचना प्रणालीविज्ञ भुषणराज श्रेष्ठ भन्छन् — महामारी नियन्त्रणका लागि बिश्व अनुभवबाट प्राप्त ज्ञानको प्रयोग काठमाडौंका लागि नयाँ हो । मलाई संक्रमण भयो कि भनेर मनमनै डर राख्ने तर स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचमा जान अप्ठ््यारो मानीरहेका व्यक्तिहरुका लागि यो सजिलो उपाय हो ।
नेपाल रिसर्च एडुकेशन नेटवर्क, जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट, इनोभेटिभ सोलुसन, नेपाल डिजास्टार–इमर्जेन्सी मेडिसिन सेन्टरलगायतका संघसंस्थाको साझेदारितामा यो प्रणाली विकास भएको हो । प्रणालीले महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने जटिल परिस्थितिमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयन गर्न र एकीकृत कार्यक्रम गर्जुमा गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिले अनावश्यक चिन्ता र मानसिक तनाव लिएर बस्नुको सट्टा आफ्नो यथार्थ स्थितिबारे उपयुक्त श्रोत र बिधि तथा वस्तुगत रुपमै स्पष्ट भएर उपयुक्त निर्णय प्रणालीले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो एप्लिकेसन प्लेस्टोरमा समावेश गर्न लाग्ने अवधिसम्म महानगरको वेभ पेज www.kathmandu.gov.npबाट सूचना सूचना लिने काम हुनेछ ।